Tsy Nampitony Ireo Haisiana ny Fahafatesan’i “Baby Doc” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2014 4:27 GMT
Miverina indray ny fihetsiketsehana rehefa nody tao Haiti, Port-au-Prince, i ‘Baby Doc’ tamin'ny 18 Janoary 2011. Saripika avy amin'ny Jean Jacques Augustin. Demotix.
Nodimandry tamin'ny fiandohan'ity volana ity, tamin'ny 4 Oktobra teo amin'ny faha -63 taonany ilay mpanao didy jadona teo aloha Jean-Claude Duvalier. Nalevina tamin'ny fomba tsotra izy herinandro taty aoriana. Na dia niandry fatratra ny tontolo tsy misy “Duvalier”, fantatra amin'ny anarana hoe “Baby Doc”, aza ireo Haisiana, dia mbola niteraka fotoana nanahiran-tsaina hatrany io nahafatesany io.
Nandimby an-drainy, Francois “Papa Doc” Duvalier, amin'ny maha-filoham-pirenenan'i Haiti azy tamin'ny taona 1971 i Duvalier, na “Baby Doc”. Mbola 19 taona i Jean-Claude, tamin'ny nahafatesan-drainy, izay azo lazaina ho filoham-pirenena tanora indrindra amin'izao tontolo izao. Noheverina fa tsy mpihetraketraka noho ny rainy i “Baby Doc” fa mbola nanao ilay politikam-pangejana ihany. Ny tena mahonena, dia ny nanohizany ny fampiasana ny “Tonton Macoutes”, vondrona milisy, mpanafay amin-kery ireo mpanohitra ara-politika. Novinaina ho tompon'antoka tamin'ny fahafatesana Haisiana mihoatra ny 60.000 ireo Tonton Macoutes ireo.
Niala teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ny 1986 i Jean-Claude Duvalier, ary nitsoaka tany France niaraka tamin'ny vadiny tamin'izany fotoana izany, Michelle, ary hala-bola $300 tapitrisa amerikana farafahakeliny no azony tao amin'ny tahiribola Haitiana. Goavana tokoa io vola io tamin'izany fotoana izany, saingy sarotra ny nandrefy ny fiantraikany eo amin'ny sieha-piainana Haitiana, raha araka ny antotanisa vao haingana, izy irery no firenena mahantra indrindra amin'ny ila-bolantany andrefana sy firenena mahantra faha-20 kosa eo amin'izao tontolo izao.
Taorian'ilay horohorontany tamin'ny 2010 nitranga tao Haiti, dia naverina avy any an-tsesintany indray ity “Baby Doc” mampiady hevitra ity. Na dia eo aza ireo fanenjehana azy toy ny kolikoly, fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona, dia tsy lasa lavitra mihitsy ny fombafombam-pitsarana fanamelohana azy ka maty olon'afaka izy.Na dia izany aza dia nolavina ny hanaovana fandevenana ara-panjakana an'i Duvalier – fandresena bitika hoan'ireo nanantena ny hizakàny ny andraikiny tamin'ny heloka vitany..
Nanangona lisitra tsy fenon'ireo lasibatra nandritra ny fitondran'i Duvalier (tamin'ny “Papa” sy “Baby” Docs) teo anelanelan'ny 1957-1986 tamin'ny teny frantsay tao amin'ny Facebook i Pierre Joel . Namoaka horonantsary ahitana ireo lasibatry ny fitondran'i Duvalier ihany koa ny “Amnesty International”.
Tamin'ny nivoahan'ny vaovao nahafatesan'i Jean-Claude Duvalier, maro ireo mpikambana diaspora Haitiana, ahitana ny sasany nandao ny firenena noho ny fanenjehana , no te haneho sy hizara ny fihetsem-pony. Naneho ny tao an-tsainy ilay Haitiana-Amerikana Patrick Gaspard, masoivohon'i Etazonia ao Afrika Atsimo:
Ny amin'ny fahafatesan'i Duvallier, dia mieritreritra ny mason'i Reniko fony izy mitantara mikasika ny anadahiny Joel izay tsy hita noho io mpanao didy jadona io aho.
_Ambassador Gaspard ( @patrickgaspard )
Nanipika ny sasany amin'ireo mpampiasa Twitter ny amin'ny fanohanan'ny Etazonia an'i Duvalier, na dia eo aza ireo tetik'izy ireo mahery vaika amin'ireo mpanohitra ao an-toerana:
— Alyssa (@alyssa011968) Febroary 9, 2014
Manohana mafy an'i Duvalllier i Etazonia noho izy mahafehy ny ankabeazan'ireo Haitiana. Ary antikaomonista izy.
Ny sasany nitsikera ny mpitondra ankehitriny, Michel Martelly, noho ny fiharoharony amin'i Duvalier sy ny mpomba azy;
Tsy azo leferina ny fahanginan'i #Martelly manoloana ny habibian'i #Duvalier, na ny teny fampiononany amin'ny anaran'ny vahoaka #Haitiana aza, dia tsy azo leferina
_Fabienne Doucet ( @bailabomba)
Tsy maintsy mijoro amin'ny maha-vahoaka mitaky ny rariny antsika isika Haitiana fa mamela ny fitondrana tsy ara-drarin'i Martelly hanafina ny lova mampihoron-koditra navelan'i Duvalier.
Na dia any ambany rangolahy aza i Duvallier, dia mbola ao sorena ireo mpampiasa Twitter sasany noho ny fahabetsahan'ireo olona fantadaza nandritr any andro maizin'ny fitondrana jadona mbola miriaria:
Haiti no ahitana mpamono olona maro indrindra avy amin'ny fironan-kevitra ankavanana nandritra ny fandevenana an'i J.C Duvallier tao Saint-Louis de Gonzague
_Matelamotgagot ( @Matelamotgagot)
Ity fandevenana an'i Duvalier no mampahatsiahy antsika fa mbola maro ireo mpamono olona miriariia malalaka manerana an'i Haiti.
_ Haiti Justice ( @haiti_justice)
Tsy voasazy tamin'ny heloka vitany na oviana na oviana ireo Duvallier ireo nandritra ny fahavelomany, eny, mbola manorisory ireo Haitiana hatrany ny tsy fampiharana ny rariny. Ny sasany manantena ireo endrika rariny hafa, ho fampaherezan-tena, tamin'ny alalan'ny ohabolana haitiana efa ela manao hoe :
— French Havana (@FrenchieGlobal) Oktobra 11, 2014
Ry Haitiana rahalahy, na dia efa voalevina aza ny fatin'i Duvallier, tsarovy ny ohabolana Haitiana manao hoe :”Tsy ny fandevenana mirindra no toky ahazoana ny lanitra”